NextMapping | Ny mpitondra tenin'ny Keynote
Misaotra anao nisafidy ny hiasa miaraka amin'ny mpampita tenin'asa Cheryl Cran ho amin'ny hetsika ho avy. Eto ianao dia hahita izay rehetra ilainao hiomanana amin'ny fananana Cheryl ho mpandahateny ho an'ny tarika misy anao. Tsy andrinay ny manampy anao amin'ny famoronana traikefa nahafinaritra!
Jereo ny horonan-tsary rehetra
Ampidino ny torolàlana momba ny fivoriambe
Fantatra ho mpanafatra # 1 ny Hoavin'ny Asa nataon'i Onalytica, ary mpanoratra ny boky 9 ao anatin'izany ny fanontana faharoa amin'ny "NextMapping ™ - Anticipate, Navigate and Create the Future of Work" miaraka amin'ny boky fiarahan'ny mpiara-miasa.
NextMapping ™ dia novolavolaina ho marika vahaolana amin'ny sehatry ny fananana mirakitra ny asa rehetra ataon'i Cheryl sy ny fikarohana momba ny ho avin'ny asa ary ny filoham-pirenena mila mandamina fanovana any amin'ny toeram-piasana. Fotoana izao tsy handre fotsiny ny ho avy fa hampiasa NextMapping ™ mba ho tonga any! Ny teknolojia any amin'ny toeram-piasana dia tsy maintsy ampiasaina hiomanana amin'ny ho avy miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fomba ahafahan'ny teknolojia hanatsarana ny valin'ny olona.
Sary ho an'ny pirinty sy tranonkala
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba ahafahan'i Cheryl manisy kabary manan-danja ho an'ny hetsika manaraka dia mifandray amintsika ankehitriny.